Samuel Nhoma a Edi Kan 1:1-28
Elkana ne ne yerenom ho nsɛm (1-8)
Ná Hanah nni ba; ɔbɔɔ mpae srɛɛ ɔbabarima (9-18)
Ɔwoo Samuel na ɔde no maa Yehowa (19-28)
1 Ná ɔbarima bi wɔ Ramataim-Sofim,*+ Efraim+ mmepɔw mu, na na ne din de Elkana.+ Ná ɔyɛ Efraimni, na na ne papa ne Yeroham a ɔyɛ Elihu ba, Tohu ba, Suf ba. 2 Ná ɔwɔ yerenom baanu, ɔbaako din de Hanah, na ɔbaako nso din de Penina. Ná Penina wɔ mma, na Hanah de, na onni ba. 3 Afe biara, na ɔbarima yi fi ne kurom kɔ Silo kɔsom* na ɔkɔbɔ afɔre ma asafo Yehowa.+ Saa bere no, na Eli mma baanu, Hofni ne Finehas,+ yɛ Yehowa asɔfo+ a wɔsom wɔ hɔ. 4 Da bi, Elkana bɔɔ afɔre, na ɔde ne yere Penina ne ne mma mmarima ne ne mma mmea nyinaa kyɛfa maa wɔn;+ 5 Hanah de, na ne kyɛfa no yɛ soronko, efisɛ Hanah na na ne kunu dɔ no paa, nanso na Yehowa mma ɔnwoo mma.* 6 Afei nso, daa na ne kora no bɔ no akutia de teetee no, efisɛ na Yehowa mma ɔnwoo mma. 7 Saa na na afe biara ɔyɛ; bere biara, sɛ Hanah kɔ Yehowa fi+ a, ne kora no bɔ no akutia ara ma ɛno nti osu, na onnidi. 8 Ɛnna ne kunu Elkana bisaa no sɛ: “Hanah, adɛn nti na woresu na wunnidi? Adɛn nti na woredi awerɛhow saa? Mensom bo mma wo nsen mma mmarima du anaa?” 9 Bere a wodidi nom wiei wɔ Silo no, Hanah sɔree. Saa bere no, na ɔsɔfo Eli te agua so wɔ Yehowa asɔrefi*+ no apongua ho. 10 Ná Hanah werɛ ahow* paa, na ɔbɔɔ Yehowa mpae,+ na osui pii. 11 Na ɔkaa ntam sɛ: “O asafo Yehowa, sɛ wohwɛ w’afenaa amanehunu na wokae me, na wo werɛ amfi w’afenaa, na woma w’afenaa ɔbabarima a,+ ɛnde mede no bɛma Yehowa ne nkwa nna nyinaa, na oyiwan renka ne ti.”+ 12 Ɔbɔɔ mpae wɔ Yehowa anim kyɛe, na bere a ogu so nyinaa, na Eli rehwɛ n’ano. 13 Hanah kasae wɔ ne koma mu. N’ano kɛkɛ na ɔbesebesee; kasa no ampue. Enti Eli faa no sɛ wabow nsã. 14 Eli ka kyerɛɛ no sɛ: “Wobɛbow nsã akosi da bɛn? Gyae nsã no nom.” 15 Na Hanah buae sɛ: “Ɛnte saa, me wura! Meyɛ ɔbea a mabotow;* memfaa bobesa anaa nsã biara nkaa m’ano, na mmom merehwie me koma mu asɛm* agu Yehowa so.+ 16 Mmu w’afenaa sɛ ɔbea huhuni, efisɛ mede ahometew ne awerɛhow na akasa abesi sesɛɛ.” 17 Ɛnna Eli buae sɛ: “Fa asomdwoe kɔ, na Israel Nyankopɔn mma wo w’abisade a wode too n’anim no.”+ 18 Na ɔno nso kae sɛ: “Ma w’afenaa nnya w’anim dom.” Ɛnna osiim kɔe, na okodidii, na n’anim anyɛ mmɔbɔmmɔbɔ bio. 19 Na abusua no sɔree anɔpatutuutu kɔkotow Yehowa anim, na ɛno akyi no, wɔsan baa wɔn fi wɔ Rama.+ Elkana ne ne yere Hanah dae, na Yehowa kaee no.+ 20 Edii afe no,* na Hanah anyinsɛn awo ɔbabarima, na ɔtoo+ no din Samuel,* efisɛ ɔkae sɛ, “Mesrɛɛ no fii Yehowa hɔ.” 21 Akyiri yi, Elkana ne ne fifo nyinaa kɔe sɛ ɔrekɔbɔ afɔre ama Yehowa na ɔde ne bɔhyɛ ade ama sɛnea ɔyɛ no afe afe+ no. 22 Na Hanah de, wankɔ bi,+ na mmom ɔka kyerɛɛ ne kunu sɛ: “Sɛ abofra no twa nufu ara pɛ a, mede no bɛkɔ, na wakopue Yehowa anim, na watena hɔ afebɔɔ.”+ 23 Ɛnna ne kunu Elkana ka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛ nea wote nka sɛ eye,* na tena fie kosi sɛ wubetwa no nufu. Yehowa mma nea woaka no mmra mu.” Na ɔbea no tenaa fie hwɛɛ ne ba no kosii sɛ otwaa no nufu. 24 Enti bere a otwaa no nufu no, ntɛm ara na ɔde no kɔɔ Silo. Ɔrekɔ no, ɔfaa nantwinini a wadi mfe abiɛsa, esiam efa* baako, ne bobesa ahina kɛse ma,+ na ɔde abofra no baa Yehowa fi wɔ Silo.+ 25 Ɛnna wokum nantwinini no, na wɔde abofra no kɔmaa Eli. 26 Afei ɔbea no kae sɛ: “Me wura, mepa wo kyɛw! Sɛ́ wote ase* yi, me wura, mene ɔbea a obegyinaa wo nkyɛn wɔ ha bɔɔ Yehowa mpae no.+ 27 Abofra yi ho mpae na mebɔe no, na Yehowa nso ayɛ m’abisade a mede too n’anim no ama me.+ 28 Na me nso mede no refɛm Yehowa. Ne nna a ɔde bɛtena ase nyinaa, mede no afɛm Yehowa.” Na ɔkotow* Yehowa wɔ hɔ.
^ Anaa “ɔbarima bi a ɔyɛ Sufni wɔ Rama.”
^ Anaa “kɔkotow.”
^ Nt., “ato ne yafunu mu.”
^ Anaa “kra werɛ ahow”
^ Anaa “ɔbea a me honhom abotow.”
^ Anaa “merehwie me kra.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Bere a ɛfata mu no.”
^ Ɛkyerɛ, “Onyankopɔn Din.”
^ Nt., “eye wɔ w’ani so.”
^ Anaa “Sɛ́ wo kra te ase.”
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɛfa Elkana ho.